ကြိုက်တယ် လို့ပြောလိုက် တဲ့ ခြိမ့်ကေ ကို ကို ဒဲ့ပြန် ပြော လိုက် တဲ့ ဖြူဖြူထွေး… (ရုပ်/သံ) – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဖြူဖြူထွေး ကတော့ Tik Tok ဗီဒီယို များ ရိုက် ကူးကာ နာမည်ကျော် လူသိများလာခဲ့ သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မှာတော့ အရမ်း ကို အောင်မြင် တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတူတဲ့အရည်အချင်းများနဲ့လူကြီးမိဘများအပေါ်မှာပါသိတတ်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ပို နေရ တာ ပါ ။ ကြော်ညာ မှာ ဆိုရင် ဖြူဖြူထွေးရယ် လို့ ပြောစ မှတ်တွင် ရလောက် အောင်ထိ သူမ ရဲ့ ကြော်ညာတွေကတော့ လက်မလည်အောင်ပဲ ရိုက်ကူးနေရပါတယ်။ အောင်မြင်မှု ရရှိလာပေမဲ့လည်း မာန်မာနမရှိ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ စိတ်ရင်းလေးကြောင့် တနေ့ထက် တနေ့ ပရိတ်သတ် အားပေးမှုကို ပိုမို ရရှိ လာခဲ့သူပါ
ခြိမ့်ကေကိုကတော့လက်တလောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအရမ်းကိုနာမည်ကြီးနေသူပါ။ MyanmarIdolသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ဦးသိန်းတန်ကသူ့ကိုငှက်ပျောသီးထုတ်ကျွေးခဲ့ရာကနေBananaဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့တာပါ။ခြိမ့်ကေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အကောင်းပြောတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက် နည်း ပါးပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကပဲ များခဲ့ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို ရှယ်တဲ့ သူ၊ ဝင်ကြည့် တဲ့သူအရေအတွက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုဝေဖန်သံတွေကြောင့်ပဲခြိမ့်ကေကိုတစ်ယောက်Bananaဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။မကြားသေးမှီကဖြူဖြူထွေးကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
အခုတခါမှာတော့ သူမကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးဖြူဖြူထွေးကတော့ ခက်ပြတ်ပြတ်ပဲပြောလိုက်တာပါ… ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်…ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ကို ကြည့်ပြီးမှတ်ချက်လေးတွေ ပေးသွားကြပါအုံးနော်…credit original poster
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြူဖြူထွေးလို မိန်းကလေးမျိုး သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ခြိမ့်ကေကို ??? …..သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးျဖဴျဖဴေထြးလို မိန္းကေလးမ်ိဳး သေဘာက်တယ္ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ္ၿခိမ့္ေကကို ??? …..#original video#Horizon
Posted by Horizon on Sunday,2August 2020